Tolchaa Wagii:- Galmee Seenaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa
Posted: Sadaasa/November 26, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (16)
Waranni Xaalyaanii, Koloneel Alamuu Qixxeessaa irratti murittii du’aa murteesse. Koloneel Alamuun guyyaa ajjeeefamuu isanii osoo eeggachaa jiranii, Xaalyaniin gama tokkoon Jalduu keessatti Warana Xaalyanii barbadeessaa kan turan, gotoota Oromoo kan Dirribsaa Faayyisaa Nagarootiin hoggnamuun akka harka isaanii keennatan kadhachaa waan turaniif, gonni Oromoo Dirribsaa Faayyisaa Xalyanidhaan “nama kiyya qabiddanii kana isiin harka jiru, Alamuu Qixxeessaa gadi-lakkifiittan malee harka kiyya hin keennu! jedhe.
Alabaan ABO koloneel Koloneel Alamudhan eebbifamee
Credits/Tags: Featured, Oromo History
Tolchaa, you have done an excellent work! Keep-up the terrific job!
Obbo Tolchaa Wagii guddaa galatomaa gootota Oromoo nu yaadachisuu keessanif. Waldaa Maccaa-Tuulama keessatti Kolonel Alamuu Qixxeesaa wajjin anilee yeroo gabaabaf haa ta’u malee hojjedhera. Kolonel qulqulluu akka bishani kan ta’an baatii batidhan walgahii waldaa Maccaa-Tuulamaa mana barumsaa Tagbareidii fi Minilikitti gageesamaa ture irratti dadhabe jedhanii guyyaa tokkollee otuu hin hafin argamudhan dhaloota haaraa eebbisaa fi gorsaa turan. Koloneel Alamuun akkuma jettan tokkummaa dhabuun qabsa’ota bilisummaa Oromoo akkuma garaa isaan gubetti darban. Kun baayee garaa nama nyaata. Haasaa Koloneel walgahii MT irratti godhaa turan yoo baduu baate vidiyodhan waraabamaa ture. Haasaa seena qabeesa baayee godhaniru. Warri seenaa barreesan vidiyolee sana barbaadanii kan isaanis ta’e kan warra kaanii otuu dhalota haaraa fi boruuti dabarsanii hedduu nama gammachisa.
Obbo Tolcha ammalee irra deebi’een galatomaa jedha.
Tesfaye Kennaa Reply
Seenaan gootota keenyaa hedduun harkifannaa milkii bilisummaa saba keenyaa fi walabummaa biyya keenyaa irraa kan ka’e akka malutti bakka hargachaa hin jiru. Kanneen keessaa Koloneel Aalmuu Qixxeessaa issaan tokko. Bilisummaan sabaa fi walbummaan biyyaa isaan umurii guutuu qabsaa’anii otoo milkii issaa hawwanuu lubuun hanqatan bakka ga’ee seenaan issaanii siidaa gootummaa issaaniif dhaabbatu irratti akka barraa’u shakkiin hin jiraatu.
,, Yaa ilmaan koo ani nan du’aa garuu seenaan Maccaa Tuulamaa akka naan wajjin hin duune adaraa ,, Dhaamsa Koloneel Aalamuun torban lama du’a issaanii dura walgahii Maccaa Tuulamaa foonaa mana barumsaa tagbaara’id keessatti ta’e irratti Uummata Oromootti dhaammatan ture.
Tolcha Wegi Reply
Obbo Baqqalaa Yaada keessan gabbataa kanaaf guddaa galatoomaa !!
Naminni dhalatee du,a irraa haafu hin jiru. Seenaa isanii boonsan kun amma jireenya keenyatti nu waliin jiraata.
Obboleessa kiyya Tolcha Wagii seena goota keenyaa nu barsiifte kanaaf waaqi si haa eebbisu. Akkasuma itti fufi seenaa gootota walabummaa Oromiyaaf osoo qabsaawanii kufan biroo illee nuu barreessi. Irra deebi’een galatoomi siin jedha.
Obbo Hawwinee Barii
Yaada keef galatoomi!
leellisaa sabaa Reply
galatoomi seenaa goototaantoo nu barsiifte baby’e gaaridha akkamaan itti fufi galatoomi
Obbolessa kiyya Obbo Tolchaa, jagna Oromoo fi Abbaa Oromoo kan turan Kol. Alamuu nu yaadachisu ketif ulfaadhu!. Ani gama kiyyan goota kanaaf miseensota WMT gameyyii kan turan tokko tokko hamma lubbun kiyya nakessa jirtutti hin-irranfadhu. Kol. Alamuu seenaa isanii ijollumma qabeen beeka. Umuriin hiriyyaa akaakayyuu ko turan. Warra kiyya wajjin wal-dhabiinsa bara dheeraa qanaa ture, kessattuu abba ko waliin. Haatauu ti Kol. Alamuu anaan akka ilmoo isanitti najaalatuu ture. Dhibdee warra keenya gidduu ture moggaatti dhiifne dhimma saba keenyyaa irratti waliigalteen dhama’aa turree. Oromoo meeqatuu kana godha laata amma, Otoo akkas gonee essa geenye laataa?.
Barmoota WMT hummata Oromoof laachaa tures yoomiyyuu hin irranfadhu. Kessattuu ilmaan Oromoo amantiin gargar akka wal hinqoodne akeekachifnii fi barmotni isaan kennaa turan heddu cimaa ture. Barmoota Kana keessaa akka fakkenyaatu kan tuqamuu qabu seenaa Obbolaa lamaani fi jaalatamoo miseensota WMT kan turani ti. Isaanis Obbo Daadhii Fayyisaa fi Hajii Biiftuu Fayyisaa ti. Obbo Daadhii Fayysaa, ekeraan isaanii Daadhii haadhuguu lubbun erga darbanii turera jechuun dhaga’e. Hajii Biiftuu garuu ammas lubbun jiru natti fakkaata. Obbo DAADHII FI HAJII BIIFTUU OBBOLEWWAN, Oromoota Tuulamaa Salaalee irra buqqaa’ee Arsii qubate ture. Adeemsa keessa Obbo Biiftuun amantii islaamaa fudhatanii HAJII Biiftuu Ta’an. OBBO Daadhii fii obbolessi isaa hordoftoota amantii adda-adda tau danda’an. Ilmaan haadhoo lamaan amantii gara-garaa hordofanif Obbolummaa isanii akka hin-haqnee ykn hin haallee barmoota cimaa hummata kenna turan obbo Daadhii fi Hajii Biiftu.
Obbo Baqqalaa nadhii, akka tasaa ta’ee Otoon dhimma mata kiyyaf deemun isaan baree , isaan jaaladhe. Barri sun bara dukkana kessaa ture, bara Dargii ti ture. Ani yeroo sana waa’ee waldaa MT wantin beeku hinturre, waldichis seeraan ala taasifamee wanta turef. Obbo Baqqalaa Nadhii yero sana bakka bu’aa Rotary International jedhamuu ture. Scholarship Rotary International sponser godhu apply gochuf isaan mallattefacisu narra turee, aniifii hiriyyan kiyya wal-qabannee waajira isaani kan naanno Ambasador Theather itti argamu daqne.Obbo Baqqalaan second tokko kessatti nuuf mallateesse, gaarii nuuf hawwee, nugeggesse. WA’EE GOOTOWWAN WMT DHUBBADHEE! BARRESSEE HINFIXUU. WALUMMAA GALATTI BIYYOON ISANITTI HAASALPHATTU! NUTIIS ILMAAN ISANII AKKA LEECHOMU! GOOTOMNU WAAQNI HAANUGARGARUN JEDHA.
Obbo Dhugaa fi obbo Tasfayee Kannaa galata guddaa qabiddu.
Obbo Tolchaa Wagii baga jirate.
Eeyyee hojiin kan nama boonsoodha. Ani akkam nama tokko yeroo seena Kolonel Alamuu Qixxeesaa arguu kootii heeduu gammadee.
Obbo Baqqalaa yaada kee gabbataa kanaaf guddaa galatoomi !!
Hailu Darge Gemeda Reply
Oromoon seenaa isaa Akka sabatti , Oromiyaan seenaa ishe aka biyyaati galmmeefate hin qabda.
Oromoon seenaa gootota isaan barreesse dhaloota dhufuuf dabarsuuf hiree hin argane. Aadaa isaas hin qabu.
Jaal ko ,ati seenaa Kolonel Alemu fi namoota isaan walin bara sana naannoo ati dirqama fudhatee fi
Itti gaafatama qabdu irratti siif argaman walin bareechite katabde . Fayyaa ta’i . Galatoomi.
Gootota keenya faarsu , jabaja barbaavhisu kennufii , kan isaan hin beekne walin walbarsiisun dirqama keenya.
Kol. Alemu abbaa qabsoo bilisummaati. Demissie kabada nama dhaloota hanga ammaati Qabsoo Bisummaa walin Jiru,
Badhaadha Serbeesaa qabsaahoota Akka fakkiiti ilaalaman kessaa nama tokko.Oromiyaa bilisoomte argamsiisuuf
Warda dhugaadhan of kenyan kessaa Badhaadha isa tokko.
liban maccaa Reply
Tolchaa Wagii….seenaa goota jalqaa kana nudhageesisuuf hedu galatoom.
Kolonel Alamu Qixeessaa….tokkummaa Oromoo ijjaaree keessa darbeetu tokkummaa saba kush naanoo Oromia warra jiraatan nama ijjareedha.
Obbo Tolchaa Guda Galatommi!!
Tolcha has well documented authentic history of the Jaldu district Oromo peoples struggle against the Dergue regime(1974-1991) and its successor – the Tigray Peoples Liberation Front occupier regime of Ethiopia in a very succinct way in historical perspective. The Oromo heroes who resisted the Dergue regime raising arms against the occupiers was part of the Oromo peoples struggle against successive Abyssinian regimes, in particular against the neo-fascist Colonial Military occupier regime. The heroes who led the resistance war: Mullata Fayiso, WEagii Saatto and others shall be remembered for ever in the history of Oromo resistance movement. Especially in the history of central Oromia as it is the only district that was liberated from the Ethiopian occupier military dictatrorship regime. The district of Jaldu occupies a special place in the history of central Oromia of the twenteeth century as it was purely led by Oromo patriotic leaders for a just cause as continuation of the Oromo peoples continued resistance to reclaim the hamitic civilization GADA system of democracy and human righjts based on peace and stability.Of course the Gindo peoples resistance aslo should be remembered as it thought the history of resistance and alliance against occupiers. The freedom days lastewd at least for more than two months excelling the days of the Paris Commun in state power during the renowned French Revolution of 1789.
I appreciate Tol;cha Wogi who documented the events of history in Jaldu peoples resistance.
In praise of the fallen heroes of Jaldo and Gindo. I rmember Lammii who was murderred in the hands of the Dergue army.
saamu'eel lammaa fiixaa Reply
obbo tolchaa goota biyya kootii baayyeen sii. boone .seenaa gootota keenyaa nuuf barreessuu keetiif baay’ee baay’ee galatoomi waaqayyo si haa eebbisu. alagaan seenaa gootota keenya kanaa awwaaleet ture. isiniyyuu seenaa gootota keenyaa ifatti nuuf baastan argachuu keenyaaf baayyeen itti gammada
dhumarratti akkuma seenaa isaanii nuuf barreessitan viidiyoowwan tokko tokko kanneen isin bira jiran osoo fuula YouTube ykn google irratti nuuf maxxansitanii yaada jedhun qaba galatoomaa horaa bulaa. waaqayyo umurii dheeraa isiniif haa kennu.!!!!?